Ingaba kunokwenzeka ukuba ukhulelwe emva kwenyanga nganye ngomhla we-1-6: impendulo kagqirha ngombuzo malunga nokukhulelwa emva kwenyanga
Abasetyhini abaninzi abaceba ukukhulelwa babuze umbuzo othi: Ngaba kunokwenzeka ukuba ukhulelwe ngokukhawuleza emva kokuya esikhathini, ngaluphi usuku lohambo lokuya esikhathini? Kuyaziwa ukuba ukuchumisa kwenzeka ngexesha lokuhamba. Ngendlela eyiyo ukubala ukukhulelwa, ukukhusela ukukhulelwa okungafunekiyo okanye, ngokuchaseneyo, ukuba ngumama?
Ngenyanga kunye nokukhulelwa
Njengoko uyazi, ezi ngqiqo zihlobene. Ukuqala kokuya esikhathini kuthetha ukuqala komjikelezo omtsha, oku kuthetha ukuvuthwa kweqanda. Leli xesha libizwa ngokuba ngumtsalane, ubude balo bu malunga neentsuku ezingama-7 ukuya kwe-20. Le xabiso elilinganiselweyo, elo lonke ibhinqa lihlukile. Ngaloo ndlela, ithuba lokukhulelwa likhona ngenyanga.
Kwinqaku! Umfazi ophilileyo akanako ukufumana ama-ovulations ngonyaka. Oku akusiyo i-pathology kwaye kuthathwa njengesiqhelo.
Ngaba ndiyakhulelwa ngokukhawuleza emva kokuya esikhathini: kwiintsuku 1, 2, okanye 6?
Kwiimeko ezininzi, ukukhulelwa akunakwenzeka ngaphambi kweveki emva kokuya esikhathini. Nangona kunjalo, kwamanye amabhinqa, okunokwenzeka kunokwenzeka ngomhla we-6 nangomhla wesi-2. Kutheni oku kwenzekayo? Iphutha lazo zonke iinguqu ze-hormone, kunye neempawu zomzimba. Umzekelo, ukuba umjikelezo wesini unemihla engama-21, iqanda livuthwa ngosuku lwesibini okanye lwesithathu emva kokugqitywa kwegazi.
Iintsuku zengozi yomjikelezo okanye nje ngelo xesha ukungaqhubi
Kukholelwa ukuba iintsuku ezinobungozi kakhulu kwi-junk okanye ezifanelekileyo ukukhulelwa okude kulindeleke ngumjikelezo womhla we-13-15. Ukunikezelwa kwexesha elide lobomi be-ovum kunye ne-spermatozoa (ii-12-36 iiyure kunye neentsuku ezisi-7, ngokulandelanayo), unokukhulelwa kwisithuba seentsuku ezi-7 ukuya kwe-20 emva kokuphela kwesithanga. Ukuba uqwalasela umjikelezo weentsuku ezingama-28, ukukhulelwa ngaphambi kwexesha elizayo leenyanga liyakwenzeka malunga neveki.
Kwinqaku! Ixesha elikhuselekileyo lokukhulelwa okungafunekiyo iveki ngaphambi nangemva kokuya esikhathini.
Unokukhulelwa njani emva kokuya esikhathini?
Ngokutsho kweengcali, ubunokwenzeka bokuchumisa kwiintsuku zokuqala emva kokuphela kokuphuma kumalungu omzimba omncinci. Nangona kunjalo, akunakwenzeka ukubhala ukuphulwa kweentlobo ezahlukeneyo kunye neempawu ezizodwa zempilo. Inkqubo yokuvuthwa kweqanda inganciphisa okanye ikhawuleze emva kokuthatha izidakamizwa ze-hormone, uxinzelelo, ukutya kunye nezinye izinto. Isizathu sokukhulelwa okungalindelekanga ngamanye amaxesha kuphuma igazi, into leyo intombazana eyenzela ukuya esikhathini. Ngenxa yoko, ubala ngokungalunganga ixesha lokuvuthwa kwaye uyavuma ukulala ngesondo esingakhuselekanga. Musa ukukhuphela ithuba lokukhutshwa ngokukhawuleza kweqanda. Ukubona kwangaphambili into enjalo yomzimba ngexesha kunzima. Konke oku kwenza kube lula ukuhamba malunga nomhla wokuqala emva kokupheliswa kwegazi.
Ngolunye usuku u-ovulation kwenzeka emva kokuya esikhathini?
Ukuba sibheka umjikelezo wezinsuku ezingama-28, okubonakalayo kubasetyhini abaninzi, i-ovulation iyenzeka ikakhulu ngomhla we-14. Ukuba i mfutshane, iqanda leqanda lihamba phambili. Ngako oko, kumantombazana onomjikelezo omde, ukukhula komzimba kwintollicle kulindeleke kamva.
Kwinqaku! Ukuqhelisa, akudingekile ukuba ulalane ngexesha lokuvuthwa kweqanda. I-Spermatozoa iyakwazi ukuhlala isebenzayo iintsuku ezi-7, ngoko ukulala ngesondo esingakhuselekanga ngeveki ngaphambi kokuba ukuphuka kwintolli kuholele ekukhulelweni.
Ngolunye usuku emva kokuvuthwa kwe-ovulation?
Ukhulelwa nini emva kokuvuthwa? Kuze kube lelo xesha, de kube iqanda lihlale lisebenza. Oko kukuthi, kwenzeka ngeeyure ezimbalwa okanye ngosuku olulandelayo emva kokuphuka kobuqili.
Kwinqaku! Abantu abaninzi badibanisa iingcinga ezifana nokukhulelwa nokukhulelwa. Kufuneka kuqatshelwe ukuba nangona ukukhulelwa kubakho, kunokwenzeka ukuthetha ngokukhulelwa kuphela emva kokufakelwa kweqanda lomntwana kwiqanda le-uterine kunye nokuqala kophuhliso lwayo.
Kulunge nini ukukhulelwa umntwana?
Iingcaphephe zincoma ukuba xa uhlela ukukhulelwa, ingqalelo nje kuphela ixesha elifanelekileyo lekhalenda yenyanga, kodwa kunye nexesha lonyaka. Ngokomzekelo, ebusika, amathuba okuba nezifo ze-catarrhal zinyuka kwiinqanaba zokuqala. Nangona kunjalo, umntu unokukhangela imeko ukusuka kwelinye icala - ekwindla umntwana uya kufumana iivithamini ezininzi, ezingenakutsholwa entwasahlobo. Uzalwe ehlobo, umntwana akayi kuziva ukungabi nako kwelanga, kodwa ukushisa akunakho umphumo ontle kwimpilo yeziqhekeza. Ngaloo ndlela, nganye inyanga inemveliso kunye neqholo.
Iimpendulo zemibuzo rhoqo rhoqo ngenyanga
Ngalansi i mibuzo edlalwa rhoqo ngabafazi ibhekiswe kudokotela kunye nezimpendulo kubo:
Ubunzima kangakanani ukuhamba kwexesha? Ngokomyinge, ubude bayo buyiintsuku ezi-3-7. Ukuba lide okanye lifutshane, linokubonisa ukuba i-pathologies.
Ukunyameka ngexesha lokuya esikhathini kunokuqhelekileyo? Impendulo yegqirha: ewe. Iintlungu zibuhlungu kwaye ziphazamise, kodwa ngokuqhelekileyo azifanele zichaphazele ukusebenza. Ngokubonakaliswa okubuhlungu, kubhetele ukubonisana nodokotela wamazinyo.
Yintoni ekumele ikwazi ukubonakala kuyo ngobuninzi? Ngokutsho kweengcaphephe, ukuba ixesha lokuya esikhathini linikezwa umyinge we-150 ml wegazi. Ukuba kukho isidingo sokutshintsha i-gasket zonke iiyure ezingama-2, inokuthetha ngokukhupha.
Ngaba kunokwenzeka ukuba ulale ngesondo ngexesha lokuya esikhathini? Oogqirha abavumeli oku. Ngaphezu koko, isenzo socansi sinceda ukukhulula intlungu yesifo kwintombazana. Nangona, njengokuba kukho ukubonisa, ezininzi izibini aziqhiphuli ukulala ngesini ngeli xesha. Kufuneka kuqatshelwe ukuba umzimba awuphikisiwe. Ukongezelela, kuyinqweneleka ukuphepha ukunyusa umzimba, njengoko oku kungakhokelela ekuphumeni kwegazi.
Ukuphepha ukukhulelwa okungafuneki, kufuneka ukwazi ukubala ngokufanelekileyo iintsuku ezikhuselekileyo zesini esingakhuselekanga. Liliphi ixesha elifanelekileyo lokusasaza? Enyanisweni, kunokuza emva kwesini na isondo. Ukuba uthetha malunga, nokuba ingaba nako ukukhulelwa kanye emva kwenyanga, ithuba lokuba luncinci.
Ultrasound ngexesha lokukhulelwa
Ukuphuhliswa kwe-intrauterine yokukhulelwa okubanzi
Ikhumba elomileyo, lidilika kwizithende
Kutheni indoda yatshintsha ingqondo yakhe ngokutshata?
Uthando lwabafazi ngokukhawuleza
Ndingathanda njani umfana onobudlelwane obubi kakhulu
Ukukhulelwa okukhukhulayo: izizathu kunye neempawu
Iintlobo zobudlelwane phakathi kwamantombazana kunye namantombazana
Intsingiselo yegama elithi "indoda enobuhlungu"
Indlela yokwenza isitayela sengwele ngesiGrike?